सडकका साथी भेट्दा स्टेजमै रोए अशोक, दमकमा चल्यो रुवाबासी, रुदै गित गाएर सबैलाई रुवाए, अशोकको यस्तो शब्द सुन्दा को रुदैन होला! (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
सडकका साथी भेट्दा स्टेजमै रोए अशोक, दमकमा चल्यो रुवाबासी, रुदै गित गाएर सबैलाई रुवाए, अशोकको यस्तो शब्द सुन्दा को रुदैन होला! (भिडियो सहित)
झापाको दमकमा धेरैपछि अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकी आएर तहल्का पिटेका छन । नेपाल गोल्डेन आइडलमा उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल स्वस्तीका काफ्ले जिताउ अभियान तथा हास्य टेली शृङ्खला हास्नु हुन्न है को गौरबमय २५ औ भागको उपलक्ष्यमा गरिएको सास्कृतिक कार्यक्रममा निम्तो पाएका टंक र अशोकले माहोल एकाएक फेरिदिए । अशोकले पहिलोपटक आफू एक्लै स्टेजमा प्रस्तुति दिने क्रममा आफ्ना सडकमा बस्दाका साथिहरु देखेपछी आखाभरी आँसु पार्दै गित गाउनै झन्डै नसक्ने अवस्था आयो ।
आफू सम्हालिदै गित गाउदा सबैले थाहा पाएर सबैका आँखा रसायो । मेरो साथी अशोक भन्ने शब्द आउदै गर्दा अशोकले स्टेजबाटै हात मिलाउदै पुराना साथी सम्झेको देख्दा हर कोहिको मन थामिन सक्दैन । आँखा रसाउने किसिमको बातावरण सिर्जना भएको छ । अशोकले आफू रुदै गित गाउदा सबैका आँखा रसाए । टंक दाइलाई बोलाउछु भनेर टंकलाई बोलाएपछी कोमल मनका टंक पनि रुन थाले । टंक र अशोकले रुदै गित गाएर सबैलाई रुवाए । गित गाइसकेपछी अशोकले स्टेजबाटै यस्तो भने कि सुन्दा सबैको मन छुनेछ । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला मुटु छुनेछ मन रुनेछ|